भारतले सार्बजनिक गर्यो चन्द्रयान–२
नयाँ दिल्ली । भारतले चन्द्रमामा पुग्ने अन्तरिक्ष यान सार्बजनिक गरेको छ । भारतको अन्तरिक्ष एजेन्सीले आगागी सेप्टेम्बरमा चन्द्रमामा पुग्ने अपेक्षा गरेको आफ्नो अन्तरिक्ष यान सार्वजनिक गरेको हो।चन्द्रयान–२ नामक सो यान भारतको दोश्रो...
आमाबाबुको हेरचाह नगर्ने सन्तानलाई जेल हाल्ने बिहार सरकारको घोषणा
भारतको बिहार राज्य सरकारले बाबुआमाको हेरचाह नगर्ने सन्तानलाई जेल हाल्ने घोषणा गरेको छ । ...
गुजरातमा समुन्द्री आँधी आउने चेतावनी, ३ लाख मानिसलाई सारियो
भारतीय राज्य गुजरातमा समुन्द्री आँधी आउने चेतावनी दिईएको छ । अरब सागरबाट उठेको चक्रवात उत्तरी दिशातर्फ १ सय ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा अघि बढेको छ । ...
चीनको चमत्कारः 'फाइभ-जी' बाट गरियो २ सय किलोमिटर टाढाको शल्यक्रिया
चिकित्साको संसारमा प्रविधि क्रान्तिकारी प्रमाणति हुँदै आएको छ । यसको एक अर्को हलचलको अवस्था चीनमा देखिएको छ । ...
भारतका दुई खर्बपतिलाई जेलको एकै कोठामा राखिने
निरव मोदीले बैंकमा १२ हजार ७०० करोडको बैंक घोटलामा संलग्न भएको देखिएको थियो । भने माल्याले सरकारी बैंकका करिब १.१४५ अर्ब पाउण्ड ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । ...
एचडीएफसी बैंकका सीइओको तलब ५५.८७ करोड
अन्य कर्मचारीको तलब १०.३१ प्रतिशतले बढाएको यस बैंकको मुख्यालय भने मुम्बइमा रहेको छ । यस बैंकमा ९८ हजार ६१ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । ...
मध्यरातमा इमरानले गरे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन
एजेन्सी । पाकिस्तान यतिखेर चरम आर्थिक र राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । मंगलबार विपक्षी पार्टीको भारी हंगामाका बीच पाकिस्तानमा बजेट पेश गरिएको छ । ...
के साच्चै उत्तर कोरियामा सयौंलाई मृत्युदण्ड दिइएको ३१८ वटा स्थान भेटिएको हो त ?
ट्रान्जिश्नल जस्टिस वर्किङ ग्रुपले आफ्नो प्रतिवेदनका लागि चार वर्षको अवधिमा ६१० जना उत्तर कोरियाली भगौडाहरूसँग अन्तर्वार्ता गरेको थियो। गाई चोरी गरेकोदेखि दक्षिण कोरियाली टेलिभिजन हेरेसम्मको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएका दशकौँका घटना...
चीनका विरुद्ध किन लाखौं हङकङबासी सडकमा ?
हङकङका लाखौं मानिस चीनकाविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रत्यर्पण कानूनमा संशोधनको विरोधमा लाखौं हङकङबासी सडकमा उत्रिएका हुन् । ...
भारतमा विमान अपहरणको धम्की दिने एक व्यक्तिलाई आजीवन कैदको सजाय तोकिएको छ । विशेष एनआईए अदालतले मुम्बईका एक व्यापारीलाई विमान अपहरणको धम्की दिएको अभियोगमा आजीवन कैदको सजाय सुनाइएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मोदीसँग पनि जोरी खोज्न थाले
उनले भने भारतले अमेरिकी मोटरसाइकलको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम गरेपनि यो अझै महगो भएको ट्रम्पको भनाइ आएको विदेशी सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार प्रकाशन गरेका छन् । ट्रम्पले अमेरिकी एक यस्तो देश होइन...
हराइरहेकाे भारतीय वायुसेना विमानको भग्नावशेष भेटियो
काठमाडौं । केही दिन अघिदेखि हराइरहेकाे भारतीय वायुसेनाको एएन–३२ एयरफ्याटको भग्नावशेष अरुणाचल प्रदेशमा भेटिएको छ । भारतीय वायु सेजा यसको खोजीमा जुटेको थियो । ...
अत्याधिक गर्मीका कारण चार यात्रुको मृत्यु
त्याधिक गर्मीका कारण भारतमा रेलभित्रै चार जना यात्रुको मृत्यु भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम आजतकका अनुसार दिल्लीबाट झाँसीतर्फ गइरहेको केरला एक्सप्रेसको रेलका यात्रुको मृत्यु भएको हो । ...
पाकिस्तानद्वारा मोदीका लागि हवाई मार्ग खुलायाे
एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि पाकिस्तानले आफ्नो हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी किर्गिस्तान भ्रमणमा जानका लागि भने पाकिस्तानी हवाई मार्ग प्रयोग गर्न...
यूके र अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले राति नसुतीकन सक्रिय रहने मानिसहरूमा एक अध्ययन गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार सधैँ एउटै निश्चित समयमा सुत्ने गरेमा, क्याफिन नखाएमा र बिहान पर्याप्त घाममा बसेमा निद्रासम्बन्धी समस्या...
अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध झन् आक्रमक, के पर्ला असर ?
काठमाडौं । विश्वको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु अमेरिका र चीन अहिले व्यापार युद्धमा होमिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत ५ मेइ १० मेबाट लागू हुनेगरी २ खर्ब...
भाजपा र तृणमूल कँग्रेसबीच हिंस्रक झडप, ४ जनाको मृत्यु
एजेन्सी– पश्चिम बंगालको उत्तर २४ परगना जिल्लाको नाजट इलाकामा शनिवार राती तृणमूल कँग्रेस र भाजपा कार्यकर्ताबीच झडप भयो । झडपमा कम्तिमा चार मानिस मारिएका छन् । त्यस्तै तीन जना गम्भीर...
चिनी पनि चुरोटजस्तै हानिकारक !
स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केअरले इङ्गल्याण्डका प्रमुख मेडिकल अधिकृत प्राध्यापक डेम स्याली डेभिसले के भन्छिन् त्यो सुन्न पर्खिरहेको जनाएको छ। किन? किनभने सन् २०३०...
मुसलमानले जब देशभक्तिको लागि मस्जिद भत्काए
‘इस्टरको दिन हमलापछि हाम्रो बस्तीका गैर मुसलमानले हामीलाई आतंकवादी देख्छन् ।’ ...